नेकपाभित्रै एक अर्काको दुश्मन | सहारा टाइम्स
Home » Politics » नेकपाभित्रै एक अर्काको दुश्मन
नेकपाभित्रै एक अर्काको दुश्मन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अहिले वाकयुद्ध चलिरहेको छ । एकअर्काको घोचपेजका कारण पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको छ । समाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक सभासम्मेलन तथा समाचार र लेख रचनामार्फत पनि एक नेताले अर्को नेतालाई घोचेपेच गरेका हुन्छन् ।
आआफ्ना नेताको बचाउ गर्दै एक नेताले अर्कोलाई घोचपेच गरेका हुन्छन् । खासगरि नेकपामा अहिले तीनवटा धार देखिएको छ । एउटा धारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका नकेपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीेले गरिरहनु भएको छ, अर्कोको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गर्नुभएको छ ।
नेकपामा तेस्रो धार पनि छ त्यो हो माधवकुमार नेपालको धार । नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहनु भएका माधवकुमार नेपालले पनि नेकपामा आफ्नै धार चलाई रहनु भएको छ । अहिले नेकपामा प्रतिपक्षिको जस्तो भूमिकामा उहाँ नै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ ।
वामदेव गौतम र झलनाथ खनालले पनि कहिले काही छुट्टै धारको लक्षण देखाइरहनु हुन्छ तर उहाँहरुले छुट्टै गुट नै चलाउनु भएको छैन । तर उहौहरुले पनि बेलाबेलामा आआफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नहुन्छ । हालै चयन भएको प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिव, जिल्ला इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र छवटा महानगरपालिकाको इन्चार्जमा बाँडफाड हुँदा त्यसले पनि पार्टीमा कति गुट छन् भनि पुष्टि हुन्छ ।
७७ जिल्ला र छवटा महानगरपालिका गरि ८३ जना इन्चार्जमध्ये ४५ जना पूर्व एमालेको भागमा परेका छन् भने ३८ जना पूर्व माओवादी केन्द्रमा परेको छ । ८३ जनामध्ये पनि ओलीको गुटबाट २२ जना, प्रचण्डको गुटबाट २८ जना, माधवकुमार नेपालको गुटबाट १७ जना, बामदेव गौतमको गुटबाट ६ जना, रामबहादुर थापाको गुटबाट ७ जना र नारायकाजी श्रेष्ठको गुटबाट ३ जना परेका छन् ।
यसरी गुट, उपगुटमा पार्टी विभाजित भएपछि नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मन एउटै हुन सक्दैन । र, एकताले पनि सार्थक रुप लिनसक्दैन । शीर्ष नेताहरुले आआफ्ना गुटका नेता कार्यकर्तालाई पृष्टपोषक गरेपछि अर्को गुटको नेताले किन महत्व दिन्छन् त ? यतिसम्मको गुट छन् कि एउटा स्कूल विभागको कारण सिङ्गै पार्टी अवरोध भएको छ ।
पार्टीका ३२ वटा विभाग, आयोग, प्रतिष्ठान, समितिका टुङ्गो लागि सकेपनि स्कूल विभागका लागि पार्टीमा रस्सा कस्सी चलिरहेको छ । सो विभागका लागि इश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठले दावी गरिरहनु भएको छ । दुवैजना सचिवालयका सदस्य हुनुहुन्छ ।
बहाना स्कूल विभाग
पछिल्लो समय घनश्याम भुसाल र बेदुराम भुसाल पनि स्कूलको दावी गर्न थाल्नु भएको छ । पार्टीका स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर राईमाझी भन्नुहुन्छ, स्कूल विभाग एउटा बहाना मात्र हो, पार्टीका अन्य विवादहरु त्यसैसँग ठोकिएको छ ।’
पार्टीको कार्यविभाजनमै विवाद छ । तर, बाहाना स्कूल विभागलाई बनाएका छन् । संगठन विभाग बामदेव गौतम र विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले पाएपछि पार्टीभित्र विवाद चुलिएको छ । उहाँ दुईजनालाई विभागीय प्रमुख बनाएपछि पार्टी भित्र असन्तुष्टि छ । स्कूल विभाग यस्तो शक्तिशाली भयो कि सचिवालयको बैठक पटक पटक बस्ने र सर्ने काम भइरहेको थियो ।
साउन १३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा सहमति नभएपछि साउन २८ गतेका लागि बैठक नै स्थगित गरेको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड नेपाल बाहिर जाने भएकाले १५ दिनका लागि बैठक सारिएको हो । प्रचण्ड साउन १३ गते दुवई र अ‍ोली साउन १८ गते सिङ्गापुर जान लाग्नु भएको हो । पार्टीभित्र कितसम्मको अन्तरद्वन्द रहेको छ भने कुरा फेसबुक र ट्वीटरमा आएको प्रतिकृयाले पुष्टि भएको छ ।
एक अर्कालाई खुल्याउने
यस्तै यस्तै विषयलाई लिएर अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, समाचार, लेख, रचना तथा सार्वजनिक भाषणबाट एक गुटको नेता अर्को गुटका नेतालाई गिज्याईरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा पार्टीमा मात्र होइन, सिगैं सरकारमा असर परेको छ । एक नेताका कार्यकर्ताले अर्को नेतालाई खुल्याउने काम गरेको छ भने अर्को नेताका कार्यकर्ताले अर्को नेतालाई खुल्याउने काम गरिरहेका छन् ।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापा (पूर्व एमाले) ले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मेलम्ची आयो ! अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बन्ने नै भो !! पार्टी त यसरी नै बनाउने हो, सिक केटा हो !!! समाजवादमा पुग्ने यो काइदा ?
नेकपाका अर्का नेता नहेन्द्र खड्का (पूर्व माओवादी समूह) ले सूर्य थापालाई जवाफ दिँदै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सूर्य थापाजी, अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुस्ती खेल्ने तिम्रो औकात छैन । तिमी उनको देब्रे खुट्टाको कान्छी औंलाको नङ बराबर पनि हैनौ ।’
यस्ता वाद प्रतिवाद दुई पूर्व पार्टीका नेताहरुको बीचमा खुबै हेर्न र सुन्न पाइन्छ । तर यसलाई रोक्नु कहाँ हो कहाँ बरु शीर्ष नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई अर्का नेताको विरुद्ध खनिन इशारा गरिरहनु हुन्छ । जसले पार्टीमा मात्र होइन, सिगैं सरकारमाथि असर परिरहेको छ ।
जसको पछिल्लो उदाहारण तरकारीको विषादी परीक्षण, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई श्यामशरणले भेटेको कुरा, भारतीय रअ प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेकेको कुरालाई लिन सकिन्छ । प्रचण्डलाई श्यामशरण भेटेको कुरा अर्को समूहले प्रचारमा ल्यायो भने रअका प्रमुख गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको कुुरा पनि अर्को समूहले प्रचण्डरमा ल्यायो ।
२१ गते बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना भएपछि विष्णु रिमालको आएको ट्वीट तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेताहरु प्रति लक्षित रहेको बुझ्न कसैलाई गाह्रा भएन । संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर विषादी र पार्टीको एकीकरणलाई लिएर पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बोल्नु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचनापछि रिमालको यस्तो ट्वीट आएपछि धेरैल अनुमान गरे कि उनले ट्वीट गरेको कुरा तत्कालिन माओवादी केन्द्रीत रहेको छ । रिमाल प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । उहाँले लेख्ने र बोल्ने हरेक कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिविम्ब र भावना रहेको बुझाई धेरैको रहेको छ ।
उहाँले आफ्नो ट्वीटमा यसको लेख्नु भएको छ,–‘भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन् कसैले छोड्छन्, दुःख दिन्छन् ! यी छौंडाहरू आफैं चलमलाएका हुन् की कसैले छोडेका ?’
त्यसपछि नेकपाका स्थायी समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले त्यसको भोलीपल्ट आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभयो,–‘विनाशकाले विपरित बुद्धि... उफ’ । धेरैको बुझाई छ, नेता शर्माले सल्लाहकारलाई दिएको जवाफ हो । किनभने संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री अ‍ोलीप्रति नेता शर्माको प्रस्तुती अलि कडा नै थियो । कुरा त्यतिमा रोकिदैन, प्रधामन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारले यसरी ट्वीट गर्नुभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै अर्का परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले भित्र र बाहिरका केही शक्तिहरु सक्रिय हुँदै गरेको अवस्था भनि आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए ।
सरकारको काम कारवाही र सांगठनिक गतिविधिमा पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना बढ्न थालेपछि सल्लाहकार भट्टराईले असार १० गते फेसबुकमा लेखे,–‘बढ्दो जन अपेक्षा, सरकारको कमजोर डेलिभरी प्रणालीबाट उत्पन्न जनअसन्तुष्टिका माध्यमबाट सक्दा वर्तमान व्यवस्था र संविधान उल्टाउने नभए वर्तमान सरकारका विरुद्ध प्रयोग गर्ने । यसका लागी कुन कुन व्यक्ति र शक्तिहरुलाई एकठाउँमा ल्याएर मुलुकमा अस्थिरता र अन्योलता सृजना गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने । यसका लागि भित्र र बाहिरका केही शक्तिहरु सक्रिय हुंदै गरेको अवस्था । अर्थात् इतिहास पुनरावृत्ति गर्ने दुस्प्रयास । समय मै सचेत भै जनमतको कदर गर्दै जन अपेक्षा पूरा गर्न तर्फ सबै केन्द्रित होऔं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई भन्नुहुन्छ,–‘मैले लेखेको कुराको जिम्मेवारी म लिन्छु अरु कसले के लेखे त्यसको जिम्मेवारी म लिन्न । मैले के लेखे त्यो मलाई थाह छ त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु ।’ तर त्यसबारेमा अरु थप प्रतिकृया दिन मान्नुभएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार जस्ता व्यक्ति समाजजिक सञ्जालमा यो स्तरको कुरा लेख्नु चानचुने कुरा होइन । पक्कै पनि उहाँले केही नकेही संकेत थाह पाएर नै लेख्नु भएको होला भनि राजनीतिक विश्लेषकहरुको दावी छ ।
बाहिर शक्ति भनेको प्रतिपक्ष दल लगायत विभिन्न शक्तिसहित अन्तराष्ट्रिय शक्ति पनि हो । भित्रि शक्ति भनेको पार्टीभित्रकै शक्तिलाई भनेको धेरैको बुझाई रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कामको बारेमा बाहिर र भित्रि रुपमै टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालको टिप्पणी ट्वीटरमार्फत सार्वजकि भइसकेपछि त्यसको चारदिन पछि नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पार्टीको बारेमा १२ बुँदे लामो फेहरिस्त आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ । त्यसमा तत्कालिन एमालेका नेता तथा सांसददेखि लिएर तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सो दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई डाम्ने काम गर्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको छ,–‘पूर्व माओवादीकेन्द्रका तर्फबाट मन्त्री भएका केही व्यक्तिहरूको विवादास्पद निर्णय निर्देर्शित र निहित परिणाम लक्ष्यितजस्तो छ । त्यसो गर्दा कूटनीतिक सम्बन्धको समेत ख्याल नगरी बिगार्नेखालको र संशयपूर्ण गतिविधि रहेको छ ।’
सल्लाहकार रिमाल र भट्टराईभन्दा उहाँ स्पष्ट रुपमा आउनु भएको छ । उहाँले रिमाल र भट्टराई पनि जवाफ दिनुभएको छ । उहाँले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुभएको छ,–‘बोल्नै नपर्ने बिषयमा प्रधानमन्त्री र सल्लाहकारहरूको जवाफी फायरिङ चलेको छ ।
काममा दिने जवाफ कुराले दिँदा तिक्तता झनै बढ्न बल पुगेको छ । भारतमा १० बर्ष मनमोहन सिंह र चीनमा सि जिन पिङको जारी कार्यशैली अनुकरण गरी नेतृत्वले कुराले भन्दा कामले परिणाम देखाउन जरूरी छ । मूल्याङ्कन त कसैको पनि सुन्दर कुरामा होइन, औसत काममा हुने हो ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउँ गर्दै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि डाम्नु भएको छ । उहाँले प्रचण्डको बारेमा यसो भन्नुभएको छ,–‘पार्टीको भूमिका शून्यप्रायः रहेको छ । एकता प्रक्रियामा ढिलाइको सरकार संचालनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ । दोस्रा अध्यक्षको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सदैव आगोमा पानी हालेर समस्या समाधानमूखी होइन, इन्धन हालेजस्तो अस्थिरता बढाउन लक्षित जस्तो र तरंगित पार्न उद्दत महसुस गर्न सकिन्छ ।’
निशानामा को को ?
पार्टीभित्रै जिम्मेवार नेताहरुले यसरी खुलेर एक अर्काको टिप्पणी गर्न थालेपछि त्यसको प्रभाव चारैतिर फैलिएको छ । र, यसले प्रतिपक्ष अर्थात विरोधी शक्तिलाई पनि मौका मिलेको छ । राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक हरि रोक्का भन्नहुन्छ, पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले जुन प्रकारका अभिव्यक्ति दिएका छन, त्यसले कसैलाई फाइदा हुँदैन ।’ यस्तो अभिव्यक्तिले पार्टी, सरकारमा मात्र नकारात्मक असर मात्र पर्ने होइन, यसले त पार्टीभित्र मेलमिलाप छैन, छलफल नै हुँदैन, नेताहरु संस्थागत हुन नसकेको सन्देश समेत जाने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रचण्ड र नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्यामशरण बीच भेटघाट प्रकरणलाई पनि त्यसैको एउटा कडीको रुपमा लिन सकिन्छ । श्यामशरण दिल्लीबाट आएर सिधै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर पुनः दिल्ली फर्केको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको थियो ।
यो समाचार कहाँबाट कसरी आयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय र भारतीय दूतावास समेत अच्चममा परेका छन् । दूतावासलाई एकछिन लाग्यो कि जानकारी नै नदिइकन आएर भेटेर गयो कि । त्यसका लागि उसले पनि खोजविन गर्यो । तर कतै फेला परेनन् । प्रचण्डका सचिवालय झन अच्चममा पर्यो । अहिले देशमा विभिन्न कोणबाट अन्तराष्ट्रिय गतिविधि बढी रहेको यस अवस्थामा यसरी विदेशीसँग भेट कसरी सम्भव हुन्छ भनि चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
प्रचण्डलाई बदनाम गराउनका लागि पार्टीभित्रैबाट कसैले यो समाचार बनाउन लगाएको प्रचण्ड सचिवालयको दावी छ । प्रचण्ड निकट नेकपाका एक नेताले भन्नुभयो, ‘रिमाल, रिजाल, भट्टराई, थापाहरुको जुन अभिव्यक्तिहरु जसरी आइरहेको छ, त्यसैको कडिको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव समेत रहेका गंगा दाहालले आफ्नो फेसबुकमार्फत प्रचण्ड र श्यामशरणबीच भएको भेट बारे आएको समाचारलाई खण्डन गर्नुभएको छ ।
जसरी विषादीके बारेमा भारतको तर्फबाट कुनै दवाव परेको छैन भनि प्रधानमन्त्री ओली र अन्य मन्त्रीहरुले भनिरहेकै बेला नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसरी नै त्यसमा भारतसँग प्रचण्डलाई पार्टीकै नेताहरुबाट मुछिने प्रयास गरेको नेकपाका एक नेताको दावी छ । श्यामशरण र प्रचण्डबीच भेटघाटको विषयमा दुतवासले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे ।
त्यस्तै, हालै भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आएर नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भेटेको कुरालाई लिएर दुवै पक्षले एक अर्कातर्फबाट त्यसलाई उचाल्ने पछार्ने काम भएको छ । ओली पक्षकाले रअ प्रमुखले प्रचण्डलाई भेटेको भनि प्रचार गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भेटघाट गरेको कुरा प्रचार गराई रहेका छन् । यसले गर्दा दुवै पक्षको बीचमा कति मतभेद रहेको छ भने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।